Muxu Tababare Arsene Wenger Ka Yidhi Barbarihii Ay Kooxdiisa Arsenal + Ma K aTagii Doon Koox,, - Wargane News
Home Sports Muxu Tababare Arsene Wenger Ka Yidhi Barbarihii Ay Kooxdiisa Arsenal + Ma...
Tababaraha kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa saxaafada la hadlay kadib markii uu soo dhamaaday kulankii Emarites Stadium ee aykooxdiisa Gunners barbaraha 2:2 ah la gashay kooxda Manchester City. Wenger ayaa ka hadlay sida ay kooxdiisa ugu adag tahay in ay kaalmaha sarta ugu sareeya ku dhamaysto.
Arsene Wenger ayaa soo qaatay hadalkii uu Pep Guardiola ku sheegay in Champions Leaque-ga oo loo soo baxaa ay England ka dhigan tahay sidii koob lagu guulaystay. Dhinaca kale Arsene Wenger ayaa xaqiijiyay in difaaca kooxdiisa ee Laurent Koscielny uu dhaawac muruqa ahi uu soo gaadhay isla markaana aanu garanayn muddada uu maqnaan doono.
Ugu horayn Arsena Wenger oo qiraya in ay qaab cabsi ah oo cadaadis ah ciyaarta ku bilawdeen ayaa yidhi: “Waxaad arki karaysay in aanu si cabsi ah oo cadaadis ku hoos jirtay ku bilaabanay, isla markaana waxaad arki karaysay sida ay saamayn wayn noogu yeelatay. Waxaanu ahayn kuwo maskax aahan u xoogan oo iska diiday in ay ciyaarta guuldaraystaan. Ugu danbayn waxaad arkayseen in teamku uu diyaar u ahaaa in uu dagaalamo. Maskax ahaan waxa uu ahaa bandhig fiican, balse farsamo ahaan waxaan filayaa in wax ka fiican aanu samayn karnay”.
Wenger oo ka hadlaya muhiimada ay kooxdiisu lahayd ayaa yidhi: “Waxaan filayaa in aanu joogno shirkad fiican, laakiin ugu horayn waxay ahayd in aanu joojino guuldarada, mar labaadka waxay ahayd in aanu dhisno kalsoonida markale, talaabada saddexaad waxaanu guulaysan doonaa habeenimada arbacada. Laakiin dhamaadkii marka aad ka soo baxdo natiijoojin niyadjab leh isla markaana aad kulan wayn ciyaarto, muhiimada kowaad waa in aanad guuldaraysan”.
Wenger oo ka hadlaya sida ay kooxdiisa ugu adag tahay afarta kaalmood ee sare ee Champions Leaque-ga loogu soo baxayo ayaa yidhi: ” Waxay noqon doontaa wax aad u adag, sababtoo ah cidkastaaba halkaas ayay joogtaa. Waxaan filayaa in Guardiola uu sheegay in afarta ugu saraysa England looga soo baxaa ay la mid tahay koob sababtoo ah aad ayay u adag tahay”.
Tababaraha kooxda Arsenal
Daawo: Ayaan Darata Ka Taagan Caasimadda Hargeysa Maayar Soltelco Oo Raaxaysanayah Iyo Ciidamada Wadooyinka Ka Shaqaynayah